श्रीमान विदेशवाट आएको २ दिनमै श्रीमती भागीन्, साना छोराहरु भन्छन् अंकलहरु घरमा आउँदा हामीलाई बाहिर लखट्नुहुन्थ्यो (भिडियो हेर्नुस्) – Online Nepalaja
श्रीमान विदेशवाट आएको २ दिनमै श्रीमती भागीन्, साना छोराहरु भन्छन् अंकलहरु घरमा आउँदा हामीलाई बाहिर लखट्नुहुन्थ्यो (भिडियो हेर्नुस्)
February 12, 2021 71
काठमाडौ । श्रीमतीका लागि दुवईको जागीर छोडे, भारतमा जागीर गर्थे श्रीमतीलाई पनि लिएर भारतमा ५ महिना राखे । अब त बानी ठिक होला भनेर घरमै राखेर भारत बसेका थिए । छोराछोरी हुर्कदै थिए त्यसैले श्रीमतीलाई नेपालमै छोडेर उनी भारतमा कमाउन थाले । श्रीमतीको चाल उस्तै भएको उनले थाहा पाए । उनले श्रीमतीलाई ८ दिन पछि आउँछु भनेर खबर गरे । तर उनी त्यो भन्दा ४ दिन अघि नै आइपुगे । अनि थाहा पाए श्रीमतीको ब्यवहार ।
श्रीमान आउँछु भनेको समय भन्दा पहिल्यै आएपछि दुई दिन श्रीमानसंगै बसिन्, जगबिर महतरा(अर्घाखाँची) ले आफ्नो घटना सुनाउँदै भने, म आएको दुई दिन पछि स्कूल जान्छु भनेर निस्केकी श्रीमती हराइन् । ८ वर्ष अघि प्रेम विवाह गरेको हुँ । कहिल्यै राम्रो ब्यवहार भएन,उनले दुख बिसाउँदै भने । आफु भारतमा भएको बेलामा श्रीमतीले स्कूलको क्यान्टिनमा काम गर्ने गरेको पनि आफुलाई थाहा नभएको बताए । उनी १४ महिना देखि फेरी भारतमा बस्दै आएका थिए । उहाँ उहाँ पनि दर्शै यता उनीसंग श्रीमतीको कुरा भएको थिएन ।
उनले श्रीमतीलाई अर्घाखाँची स्थित घरमा छोडेर गएका थिए । तर छोराछोरी पठाउन भन्दै उनी घर छोडेर बजारमा भाडा लिएर बस्न थालेकी थिइन् । सोमवार अर्घाखाँची घर जाने स्कूलमा विदा मिलाउन भन्दै आइतवार स्कूल गएकी श्रीमती उतैवाट हराएको जगबीरको भनाई छ । स्कूलमा श्रीमान विदेवाट आए पनि एक पैसा ल्याएनन् मलाई पैसा सापटी दिनु भनेर स्कूलवाट उल्टै पैसा समेत लिएर हिडेको आफुले थाहा पाएको जगबीरको भनाई छ ।
Prevछोरी मानेकी सपनाको गोप्य फोटो आफ्नो मोवाइलमा किन राखे विनयजंगले ? ‘देखाइदिउँ !’ भन्दै दिए चेतावनी (भिडियो हेर्नुस्)
Nextजन्नुहोस संकट हटाउन कुन राशीका व्यक्तिले के गर्ने ?
अन्त्यष्टिका लागि यसरी लगियो भागरथीको शव (भिडियो हेर्नुस्)
कैलालीमा कार्यवाहक वडाध्यक्षको कोठामा प्रेमिका मृत फेला
सडकको पेटीमा भेटिएका मुस्लिमले यति मिठो दोहोरी गीत गाएपछि सबै चकित,भिडियो एकाएक भाइरल
पोखरी खन्ने क्रममा सात फिटे विष्णुको मूर्ति फेला
फिल्म राजा हिन्दुस्तानी रिलीज भएको २४ बर्ष पछी थाहा भयो यस्तो पर्दा पछाडीको वास्तविक कुरा… (3189)
क्यामेरामा रेकर्ड नभएको भए कसैले पत्याउने थिएन यो घटना, जान्नका लागी भिडियो सहित पुरा हेर्नुहोस (2862)
प्रयोग भइसकेको क’ण्ड’म बटुलेर महिलाले गर्थिन यस्तो काम, प्रहरी पर्यो चकित् (1477)
लाइसेन्स निकाल्दै हुनुहुन्छ भने फेरी आयो नयाँ नियम (1063)
‘मेरो बुढीको गो’प्य अं’गको फोटो त्यो मान्छेको मोवाईलमा कसरी गयो’, भेटियो थुप्रै प्रमाण (भिडियो) (614)
सुतेका थिए उनि….. तर उठ्दा विश्वभर भाइरल भैसकेका थिए (तस्विर सहित) (464)
नङमा सेतो आकार हुनुको अर्थ यस्तो हुन्छ : पढ्नु’होस् (427)
भाइरल हुनकै लागि यी युवतीले जे खाइन हेर्नुहोस (396)
प्रदेश ट्राफिक कार्यालय भरतपुरमा (379)